ရခိုင် အတွေး၊ရခိုင့်အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ethnic Groups » ရခိုင် အတွေး၊ရခိုင့်အမြင်
Posted by ေအာင္ လ on Jun 18, 2012 in Ethnic Groups, Politics, Issues | 25 comments
မေးလ်ထဲကို ပို့လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နတ်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ စစ်ကို ချစ်လို့ မြတ်နိုးလို့ လက်နတ် စွဲကိုင် တိုက်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ တစ်နိုင်ငံလုံး သိကြမှာပါ။
မိမိတို့အမျိုးသား လူမျိုးစုတို့၏ လွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်နေခြင်း၊တန်တူအခွင်အရေးအတွက် တိုက်နေခြင်း၊ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် တိုက်နေခြင်းနှင့်ဒီမိုကရေးစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်နေခြင်း စသည့် မျိုးစုံသော အကြောင်းပြချက်များပြကာ ကိုယ့်ပြည်နယ် ဒေသအလိုက် နည်းမျိုးစုံသုံး၍ စစ်အစိုးကို တွန်းလှန်း တိုက်ခိုက်နေခြင်းဟာ တရားမျှတတဲ့ စစ်ပွဲဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်နိုင်တယ်။ လူသားတိုင်းဟာ လွတ်လပ်မှုကို ချစ်ခင် မြတ်နိုးကြတယ်။ ဒီအတွက်လည်း အင်အားချင်း မမျှတတာတောင် အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးဘဲ စစ်ယန္တရားကြီး ပြိုလဲ ကျသည့်တိုင်းအောင် တွန်းလှန်းသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ လက်နတ်ကို စွဲကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ရခိုင်လူမျိုး မှလွဲ၍ ကျန်တိုင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ဦးတည်းချက်ဟာ တစ်ခုတည်းသော ပြည်ထောင်စု စနစ်ကြီးဆီသို့ လျှောက်လှမ်းသွားနေခြင်းဖြစ်တယ်။
ရခိုင်လူမျိုး ကျတော့လူမျိုးစွဲတွေဖြစ်ကြတယ်။ ပြည်ထောင်စု ပြည်ထောင်စုဟု လူကြားကောင်းအောင် ပါးစပ်က အော်နေပင်မဲ့ သူတို့တကယ်လိုချင်းနေတာ သီးခြားနိုင်ငံပါလို့ ပြောလို့ကလည်း မရပြန်ဘူး
ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ မှီတင် နေထိုင်နေတဲ့ ရခိုင်ပါဟု ထင်နေတဲ့ လူတွေအားလုံးဟာ ရခိုင်ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးစစ်စစ်ဆိုတာ မဟုတ်လိုဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တိုင်း ရခိုင်ဖြစ်ရမှာလား ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်မှာလည်း ရခိုင်လူမျိုးနဲ့တူတဲ့ ဘင်္ဂလီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရှိနေတယ်။
ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ ့ကြားထဲကို မသိမသာ သိုသိုသိပ်သိပ် ဝင်ရောက်နေရာယူထားတဲ့ တဘက်နိုင်ငံသား ဘင်္ဂလီလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟာ ရောနှော ကူးလူး ဆက်ဆံ အတူနေထိုင်နေတဲ့ အတွက်ကြောင်း ရခိုင်လား ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်မှ ဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီလားဆိုတာ ခွဲခြားသိဖို့ အရမ်းကို ခတ်ခဲ လာပါတယ်။ိုင
လူမျိုးချင်းလည်း တူ၊ကိုးကွယ်ယုံကြည်သည့် ဘာသာကလည်းတူ၊ ဘာသာစကားကျပြန်လည်း အနည်းငယ်တူနေပြန်တော့ ခွဲခြားသိဖို့ မခတ်ပေဘူးလား။
ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် ဘင်္ဂလီဗုဒ္ဓဘာသာတွေက မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်လာနေခြင်းရဲ့အဓိက အချက်ကိုပြောရရင် သူတို့နေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့အစိုးရက မူဆလင်ဖြစ်နေတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလီတွေအတွက် နည်းနည်း ကြပ်တည်နေတော့ မြန်မာဘက်ကို ကူးလာ နေထိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။
အဲဒီလို ကူးလာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အလိုအလျှောက် ရခိုင်ဖြစ်သွားကြရော။
တဘက်နိုင်ငံဘက်က ကူးလာတဲ့ အုပ်စုတွေ အင်အားကြီးလာတဲ့ အခါကျတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က မူလ ဒေသခံဖြစ်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကလည်း ရခိုင်ဘယ်သူ ဘင်္ဂလီဘယ်သူ ခွဲခြားမသိတော့ ကူးလာတဲ့ အုပ်စုတွေ ထလုပ်တိုင်း ရခိုင်တွေ လုပ်နေတယ်၊ ရခိုင်တွေ သီးခြားနိုင်ငံတောင်းနေတယ် ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်နယ်စပ် ဖြစ်နေတော့ ရခိုင်ဘက်ခြမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ လူမျိုးတွေဟာ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းမှာလည်း ရှိနေပြန်တော့ ဒီပြဿနာ ဖြစ်ရတာပေါ့။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်လူမျိုးတွေထက် များပြားတဲ့ ဘင်္ဂလီဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာ မြစ်တစ်ဘက်ကမ်း ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရှိနေပါတယ်။
အဲဒီလူမျိုးတွေ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ သာသနာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ အတွက် မူဆလင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့
ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်မှာ မလွတ်လပ်ကြဘူး တစ်ယောက်မကျန် မြန်မာဘက်ကို ကူးလာဖို့ကျတော့လည်း ခတ်ခဲနေတယ် မဖြစ်နိုင်ဘူး အဲဒီတော့ ဖြစ်နိုင်တာကို စဉ်စားလာတယ် ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့လူမျိုးတွေ နေထိုင်နေတဲ့ နယ်စပ်ဒေသ နှစ်ခုပေါင်းပြီး သီးခြားနိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့ပါဘဲ။ ဘင်္ဂလာမှာနေတဲ့ လူတွေက ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်က ခွဲထွက်ဖို့ တောင်းဆိုနေသလို မြန်မာဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေကလဲ ခွဲထွက်ဖို့ တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ မဆီမဆိုင် ရခိုင်လူထုက လူကြမ်းဖြစ်ခံနေရတယ်။
ဆိုတော့ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့တွေမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက သီးခြားနိုင်ငံ တည်ထောင်ဖို့ တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်လာရတာပေါ့ဗျာ။
ရေးတဲ့ကောင် နဲ ့၊ ပြန်ရှဲတဲ့ကောင် ရဲ ့အမေဆီမှာ အရင်ဆုံးသွားတောင်းခိုင်းလိုက်ပါ
တောင်းတိုင်းသာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒို့မြန်မာနိုင်ငံလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကတဲက ဒီမိုကရေဆီရတာကြာပေါ့။
မင်းပြောပုံက ရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်တောင်းနေတာ မင်းတို့မွတ်ဆလင်တွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်း
( ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်လူမျိုးတွေထက် များပြားတဲ့ ဘင်္ဂလီဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာ မြစ်တစ်ဘက်ကမ်း ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရှိနေပါတယ်။
ဆိုတော့ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့တွေမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက သီးခြားနိုင်ငံ တည်ထောင်ဖို့ တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်လာရတာပေါ့ဗျာ။ )
ဒီလိုလုပ်ပါလား…ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဝက်သားစားခိုင်း မှန်တယ်ဆိုယင် တို့ပြည်ကိုခေါ်မယ်
ဒီလိုကျယင် မင်းတို့တွေစိတ်ချရပါ့မလား ဟိုအသားစားယင်စားနေမှာစိုးရသေးတယ်….ဟဲဟဲ
ချီးစားတဲ့ သတ္တဝါကို မင်းတို ့တွေဘဲ စားပါကွာ။့သန် ့သန် ့လေး နေသွားမယ်။
ချီးမစားတဲ့ ဝက်ဆိုရင်ကောဗျာ စားမလား။ :-) ခြံနဲ့မွေးထားတာဆိုစိတ်ချရတယ်။
ခေါင်းစဉ်လေး ကြည့်ပြီး ဖတ်မိပါတယ်
မဖတ်မှာ စိုးရိမ်လို့ ခေါင်းစဉ် ပြောင်းတပ်ထား တာလား
တန်ဘိုးရှိတဲ့ အချိန်လေး နှမြော ပါဘိ…အိ…အိ….
သူကြီး ရေ ကျနော် အကြံပေးတာပါ.. စည်းတော့ထုတ်မထားဘူးထင်ပါတယ် ကျနော်ပြောမှာကို
ပြောချင်တာ က ရွာ သား တို့ ရေ… ကျေးဇူးပြု ပြီး ရခိုင် ပိုစ့်လေးတွေ မရေးကြပါနဲ့တော့ လားကွယ်
အခင် အမင် ပျက်မှာ ဆိုးလို့ ပါ… ပြီးရင်ကိုယ် ရေးတာ က ဘာ မှ ထူးခြားမလာ …. အချင်းချင်း တိုက် ခိုက် နေကြတာ ပဲ ရှိတယ်… သက် ဆိုင် ရာ က သက်ဆိုင် သူ တွေ လုပ် တာ ကို စောင့် ကြည့် ကြပါလား…
အကြံ ပေးတာပါ… ဒီ ကိစ္စ က ကိုယ် ဖြစ် ချင်တိုင်း ဖြစ်နိုင်လောက် အောင် မလွယ်ကူ ပါဘူး… ဆို တော့ …. အရမ်းသိမ်မွေ့တဲ့ ကိစ္စမို့လို့ မရေးကြတော့ ဘဲ….. တစ် ဦးနဲ့ တစ်ဦး သဘော ထားလေးတွေ ကြီးပေးကြပါ လား… နေ့တိုင်းငြင်းခုန်နေတာတွေကိုပဲတွေ့နေရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး…. လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲ မှာ မကောင်းတဲ့ အတွေးအမြင် နဲ့ မကောင်းမှူ က အမြစ်တွယ် လွယ် လို့ ပါ…. အခု တောင် တော်တော် လေးစိတ် ဝမ်း ကွဲ နေ ကြ ပြီ…
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရေလေ.. ရခိုင်တွေ ကအသားမည်းတဲ့ သူများတယ်.. ဒါပေမဲ့ ရုပ်က အသိသာကြီး………
ဘင်္ဂါလီ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက နိုင်ငံတောင်းတာလား.. ရီစရာတော့ တော်တော် ကောင်းနေပြီ။
ယခုကဲ့သို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းသို့ ဝင်ရောက် အကြမ်းဖက်ရန် လွန်ခဲ့သော ခြောက်လခန့်ကပင် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက် သမားများက အကွက်ကျကျ ဖန်တီးစီမံခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်။
ဘင်္ဂါလီရိုဟင်များ လွန်ခဲ့သော ခြောက်လခန့်ကပင် စနစ်တကျ စစ်ရေး ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်းကို ၂၀၁၂ ခု ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ The Somokal သတင်းဌာနက အောက်ပါအတိုင်း ရေးသား တင်ပြထားသည်။
ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွ အုပ်စုများ ပေါင်းစည်း။
ခိုင်လုံသော သတင်းရင်းမြစ်များအရ ရိုဟင်ဂျာများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသုံး တာကာငွေ သန်း ငါးရာ ကို လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ဝယ်ယူရန် စုဆောင်းနေကြသည်။
အဆိုပါ သတင်းအရ Rohingya Solidarity Organization (RSO), ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့ ဖြစ်သော Arakan Movement, Arakan People’s Freedom Party အမည်ခံထားသည့် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့ နှင့် Arakan Rohingya National Organization (ARNO) တို့သည် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်း အဖြစ် ပေါင်းစည်း လှုပ်ရှားနေကြသည်။
ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့်
ဒေါက်တာ ဝါကာအူဒင်း Wakar Uddin (ထိုင်နေသူ၊ ဝဲမှ ဒုတိယမြောက်)၊
မိုဟာမက် ယူနွတ် Muhammad Yunus, (ရပ်နေသူ) တို့အား တွေ့ရစဉ်
ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်သည့် RSO ဥက္ကဋ္ဌ Dr Muhammad Yunus၊ ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင် များ ဖြစ်ကြသော Dr Wakar Uddin, Abul Fayaz Zilani, Nurul Islam, Salamat Ullah, Muhammad Shafi Ullah, Nazmul Alam, တို့သည် ဆော်ဒီ အာရေဗျနိုင်ငံ ရိယာ့ဒ် မြို့တွင် အစည်း အဝေးတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး Arakan Rohingya Union (ARU) ဟူသည့် တစ်ခုတည်းသော အလံအောက်တွင် ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွများ အားလုံး စစ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီ ခဲ့ကြသည်။ ပေါင်းစည်းလိုက်သော အဖွဲ့သစ်၏ တာဝန်ခံများ အဖြစ် Dr Muhammad Yunus, Abul Fayaz Zilani, and Nurul Islam တို့ကို တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွ ခေါင်းဆောင်ကြီး Nurul Islam
အဆိုပါ အစည်းအဝေးပြီးနောက် များမကြာမီပင် ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် ရန်ပုံငွေများ ရှာဖွေခဲ့ကြပြီး လက်နက် ခဲယမ်း မီးကျောက်များ ဝယ်ယူ စုဆောင်းခဲ့ကြကြောင်း အဆိုပါ သတင်းရင်းမြစ်အရ သိရသည်။
ရိုဟင်ဂျာ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သော Salamat Ullah သည် လွန်ခဲ့သော ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ စစ်တကောင်း ဒေသ Chunoti တွင် ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွများကို ဦးဆောင်နေခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Nazmul Alam သည် ရိယာ့ဒ်မှ ဘန်ကောက်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး Abu Siddiq Arman မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ကော့ဘဇား ဧရိယာ၏ coordinator အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည်။ ထို့ပြင် ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွများ၏ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များမှာ ကော့ဘဇားတွင် အခြေစိုက်လျက်ရှိကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သော Nur Muhammad ကို လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းခန့်က ကော့ဘဇားမြို့တွင် ခြေရာခံမိခဲ့သေးသည်။
မကြာသေးမီ နှစ်များက ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွ အုပ်စုများမှာ အုပ်စုငယ်များ အဖြစ် ကွဲပြားနေကြသော်လည်း ယခုအခါ တစ်ခုတည်းသော အလံအောက်တွင် စုရုံးမိကြပြီး ရံပုံငွေများ စုဆောင်း ရရှိနေပြီဟု အဆိုပါ သတင်းရင်းမြစ်က ဆိုသည်။ စစ်သွေးကြွများ အနေဖြင့် တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်ကူးခြင်း၊ လူကုန်ကူးခြင်း၊ နှင့် တရားမဝင် လက်နက် ရောင်းဝယ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြသည်။ ယခင် သတင်းပတ်က ဆိုလျှင် ရိုဟင်ဂျာ လက်နက် ရောင်းဝယ်သူ တစ်ဦးကို Gorzonia ဧရိယာတွင် AK-47 လက်နက် ဖြင့် ဖမ်းမိခဲ့သေးသည်။ အဆိုပါ လက်နက်ကို တာကာငွေ သုံးသိန်းခွဲဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ပြီး တာကာ လေးသိန်းဖြင့် ပြန်လည် ရောင်းချရန် ဖြစ်သည်ဟု ဖမ်းမိသူက ပြောသည်။
ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွတို့ အနေဖြင့် NGO Operation များ ကို အကြောင်းပြုပြီး ရံပုံငွေများ ရရှိထားကြောင်း တစ်ခုမကသော သတင်းရင်းမြစ်များက အတည်ပြုကြသည်။ အဆိုပါ Operation များမှ နေ၍ တာကာငွေ သန်း ၂၅ဝ ခန့်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှနိုင်ငံ ကော့ဘဇားနှင့် ဘင်ဒရိုဘင် ဒေသများ တွင် Muslim Aid, ကရုဏာ၊ Imam Muslim, Darul Ansar, Sammannito Manabik Uddyog စသဖြင့် လူမှုရေး အမည်အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး စုဆောင်းထားကြသည်။
ငွေကြေးများကို ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများစွာနှင့် စစ်သွေးကြွများထံသို့ ဟွန်ဒီများမှ တစ်ဆင့် လွှဲပေးကြသည်။ မကြာသေးမီက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ အရ ကော့ဘဇားခရိုင် Zhilongza ရှိ Imam Muslim Islamic Centre မှ စစ်သွေးကြွများ ၏ ငွေကြေး အထောက်အပံ့များဖြင့် လည်ပတ်နေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်း၏ ဒါရိုက်တာ Hafez Sala-ul Islam မှာ RSO- ရိုဟင်ဂျာ သွေးစည်းညီညွတ်ရေး စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့၏ chief coordinator ဖြစ်သည်။ စုံစမ်းမှုများအရ စစ်သွေးကြွမှုများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို စစ်တကောင်းနှင့် ကော့ဘဇားတို့တွင် မွတ်စလင် စာသင်ကျောင်းများ၊ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ နှင့် NGO များမှ တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်နေကြသည်ဟု သိရသည်။
RSO စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှုးဟောင်း ဖြစ်သော Salamat Ullah မှာ ကော့ဘဇားခရိုင်၊ Kalatali တွင် Adarsha shikha Niketon အမည်ဖြင့် မွတ်စလင် စာသင်ကျောင်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ RSO စီအီးစီ အဖွဲ့၏ ဒုဥက္ကဌ ဖြစ်သော Muhammad Zaber နှင့် အဖွဲ့ဝင် Nur Muhammad တို့မှာလည်း ထိုကျောင်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွတို့သည် ကော့ဘဇားရှိ ဒုက္ခသည် စခန်း နှစ်ခုကိုလည်း သူတို့၏ နက်ဝပ် များအဖြစ် အသုံးပြုနေကြသည်။ တရားမဝင် နေထိုင်ကြသည့် စစ်သွေးကြွများမှာ ဒုက္ခသည် စခန်းများမှ နေ၍ အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် အကွက်ကျကျ စီစဉ်နေကြသည်။ ထို ဒုက္ခသည် စခန်းများမှ သိသာ ထင်ရှားသည့် စစ်သွေးကြွများမှာ Ali Zohar, Haji Fazal, Rafiq Ahmad, Hafiz Nayan, Lalu Daktar, Shamsu Majhi, Hafiz Zalal, Moulana Shafiullah, Nurul Haque Mazhi, Nur Mohammad, Abdul Rashid, Mohammad Sayed, Abu Qader, Abu Yahiya, Hamid, Ruhul Amin နှင့် Abdullah Mohammad တို့ ဖြစ်ကြသည်။
စစ်သွေးကြွ သုံးရာခန့်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ဘာသာရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ အသွင်ဆောင်လျက် မြေအောက်လှုပ်ရှားနေကြကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်က ဆိုသည်။ အများစုမှ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် စစ်သင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သူများ ဖြစ်ကြသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ဒုက္ခသည် စခန်းများ အတွင် းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လိုကြောင်း၊ သို့သော် ဒုက္ခသည် စခန်းများရှိ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ကြောင့် လုပ်ဆောင်ရ ခက်ခဲကြောင်း၊ လွန်စွာ တိကျသော သတင်းမရရှိဘဲ ဒုက္ခသည် စခန်းများကို စီးနင်း သိမ်းပိုက်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရန် မလွယ်ကူကြောင်း ကော့ဘဇား ခရိုင် ဒုတိယ ရဲမှူးကြီး Chatradhor Tripura က ပြောသည်။ အဆိုပါ အခြေအနေများကို ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက် သမား terrorists များက အမြတ်ထုတ် အသုံးချနေကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဤကဲ့သို့ ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာများက အကွက်ချ စီစဉ် နေခြင်းကို လွန်ခဲ့သော ခြောက်လခန့် (၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်) နေ့ ကတည်းကပင် အောက်ပါ သတင်းတွင် မူရင်း ဘင်္ဂလီဘာသာဖြင့် ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်သူများ အနေဖြင့် ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို အသေးစိတ် သိရှိစေရန် အတွက် ယခုကဲ့သို့ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Counter Check လုပ်လိုသူများ အနေဖြင့် Google Translate သို့ သွားရောက်ပြီး ဘင်္ဂလီဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆို ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါသည်။ အသေးစိတ် နားလည်နို်င်မည် မဟုတ်သော်လည်း Rakkhapureans တွင် ဖော်ပြထားချက်များ၏ မူရင်း ဘင်္ဂလီဘာသာ သတင်းဖြစ်သည်ကို ရိပ်စားနိုင်ကြမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ စစ်သွေးကြွ ခေါင်းဆောင်ကြီး Nurul Islam (ဝဲစွန်)
ပုံတွေတော့ ပါမလာဘူး.. ကိုယ့်ဟာကို အဲဒီ လင့်မှာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အောင် လ says:
အေးအေး နင့်လဲလာသိမ်းနေအုံးမယ်။သတိထား ဆန။
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ အရိုင်းအစိုင်းလူသားဆိုတာ ကိုယ်တိုင် သက်သေပြနေတာလား။
ရခိုင်နှင့် ကုလား ရုပ် ခွဲခြားလို ့ဘယ်တော့မှ မရဘူး။
ရတယ်လို ့ဆိုနိုင်သူ ဒီသာ လာခဲ့ကွ။
အေး.. ငါလာမယ်.. စားရိတ်ပေး.. ပြီးတော့ ခွဲပြမယ်(ဝက်သားကျွေးပြီး)
ရိုဟင်ဂျာ တွေသာ အဲ့သလောက် လက်နက်ရှိရင်
ရခိုင်ပြည် ပြာဖြစ်နေလောက်ပီ။ဒါပေမယ့် သူတို ့က
လုပ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ဖိနှိပ်ခံရ လွန်းလို ့ပြန်ချတဲ့
ခံစစ်ဘဲ။ကြားရတာတွေကို နားယောင် တရားနာမနေ
ချီးကျုံးတဲ့ ဘင်္ဂလီထက်တော့ ရခိုင်အရက်သမားတွေက ပိုမြင့်မြတ်ပါတယ်ကွ။
ဟုတ်တယ်ဗျို့ … ဟုတ်တယ်ဗျို့.. ဆော်ဒီမှာ လတ်သလော ၉ ယောက်ရှိပြီ..။ လူမြင်ကွင်းမှာ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရတာ..။ အဲဒီလောက်ကို သတ္တိရှိကြတာကလား..။
ဟဲ့ ကုလားတွေ… အတော်ရောင့်တက်နေပါလား…။ မြန်မာစာရေးပြီး မြန်မာကိုစော်ကားနေပြန်ပါဘီ..။ ဒါကြောင့်မို့ လူ့ချဉ်ဖတ်ဖြစ်နေတာပေါ့..။ သနားစရာကို မကောင်းတော့ပါဘူး..။ အစက နိုင်ငံမဲ့လေးတွေမို့ ဂရုဏာ ထားမိပါရဲ့.. အေးဝတီနဲ့အောင်လတို့ကြောင့် သနားချင်တော့ဘူး..
ရွာထဲတွင် ပါးစပ် ၌ ချီးပေနေသော ခွေးမဲ သုံးကောင် ဟောင်နေပါသည်၊ မောင်းထုတ်ကြပါ၊
မင်းတို.လို…အမျိုးယုတ် အယူမှား ကုလားတွေနဲ. ငါတို.သွေးချင်းတွေကိုမနှိုင်းနဲ…..
ဝင်လို.မရလို.ရခိုင်ပါ သူတို.အမျိုးထဲဆွဲသွင်းနေတဲ. ဝက်ကျင့်ဝက်ကြံ ကုလားတွေ….
အားလုံးကို မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးမှ ပြတ်သားစွာရှုတ်ချပါသည်……….။
အေး တို့တိုင်းနိုင်ငံဟာ၊ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိတ်ဆွေမပီသတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဝိုင်းရံနေရတော့၊ သမိုင်းအဆက်ဆက် ခံရတဲ့ဘက်မှာပိုများခဲ့ရပြီး၊နယ်စပ်မှတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝဋ်ဒုက္ခ္ခတွေအမြဲမငြိမ်းနိုင် ခဲ့ကြဘူး။
အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့မှ တစ်ခါသွေးခွဲခဲ့ပြန်၊အယူဝါဒမျိုးစုံနှင့် ဂိုဏ်းဂဏတွေကွဲပြီး၊တရုတ်ကမြှောက်ပေးလိုက်၊
ယိုးဒယားကအသုံးချလိုက်၊အန္ဒိယကပင့်ပေးလိုက်၊ဘင်္ဂလားမှ တိုက်ပေးလိုက်နှင့် နွားကွဲတော့ ကျားဆွဲဆို သ လိုဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲ။
အနောက်ဘက်မှလည်းရခိုင်မျိုးနွယ်ဆိုပါးစပ်ဝဲပေါက်မတတ်ပြောဆိုကာနေရာလုဘို့အမြဲလုပ်နေကြသလို၊အရှေ့ဘက်မြောက်ဘက်မှာလည်း ကိုးကန့်ပါ၊ ဝပါဆိုပြီး အီးစံကွမ်းတွေမြန်မာတိုင်းရင်းသား လုပ်လာကြ၊ အာဏာတည်မြဲရေးလူတစ်စုရဲ့ထောက်ခံမဲရရှိရေး မှတ်ပုံတင်သုံးခေါက်ချိုးအဖြူရောင်တွေမှာ ၊နိုင်ငံသား မဖြစ်သင့်သူတွေနိုင်ငံသားဖြစ်ဘို့ ဖန်လာ ကြ။လဘ်လာဘတွေအသောမသတ်—၊ အော်— တိုင်းပြည် ကိုရောင်း စားခဲ့ကြတာတွေ–အဲသည်လုပ်ဇတ် ပညတ်တွေဖြစ်ပါပေါ့ ။ ခုတော့တို့မြန်မာတွေရှေ့ရေး အောင်မယ်လေးလို့သာ အော်ချင် ၊ အဇ္ဖရေးသား တို့ လို တို့သ္ခင်စိတ်မွေးကြ
ဟေ့– သည်မှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေမြန်မြန်သွေးစည်းကြ၊ညီညွတ်ကြဗျား။
“မေးလ်ထဲကို ပို့လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။”
ဟွန့်သူ့ကိုယ်သူများ သဂျီးများမှတ်နေလားမသိဘူး။ ပို့တဲ့သူလဲတော်တော်နုံတယ်။
သီးခြားနိုင်ငံလေးဘာလေးနဲ့ ခုမှပဲပေါ်တော့တယ် စိတ်ရင်းမှန်တွေလေ။ ရခိုင်လူမျိုးက လဲ မြန်မာပြည်ထဲကနေ ဘယ်တော့မှ သီးခြားနိုင်ငံစွဲထွက်မယ်တောင်းဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်လူမျိုးက မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့တစ်သားထည်းပဲ။ အဲ့ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာမပါတာတော့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။
ဒီကောင်တွေ ဒီပို ့စ်အရ ခွဲထွက်မယ်၊ဘာညာနဲ ့
တမျိုး ပါလား။သမိုင်းတော့ ကမောက်ကမဖြစ်
မွတ်စလင်များရဲ့ လုှိ့ ့ဝှက်ချက် မြန်မာတွေ သိ အောင် ဆက် ဖြန့် ပေးပါ
မြန်မာနိုင်ငံအ တွင်း နေထိုင်ကြတဲ့ မွတ်စလင်ဘာသာဝင် အပေါင်းတို့
ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းနေစဉ် အမျိုးဘာသာသာသနာကို ချစ်မြတ်နိုးသော အာဖြင့် ကျနုပ် တို့အားလုံးစီးပါွးရေး လူမှူ ရေးမှအစ အချင်းချင်းယိုင်းပင်း ကူညီကြရမည် ထိုကြောင့် ကျန်ုပ် တို့မွတ်စလင်ဘာသာဝင် အပေါင်းတို့သည် စီးပါွးရေးနှင် လူမှူ ရေးအရ တိုက်စစ်ဆင်သော အားဖြင့်
မိမိတို့ဘက်မှ ပြန်လည် ရောင်းချ ခြင်းမှတစ်ပါးမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းတွံ င် းနေစဉ်အတွင်း နေ ့စဉ် ဈေးဝယ်သောအခါ ကျွန်ုပ် တို့အစ္စလာမ် အမှတ်အသားပါသော(၇၈၆) အမှတ်တံဆိပ် () ဆိုင်များတွင်သာ ဈေးဝယ်ကြရမည် ၎င်း အဓိပယ် သည် (၇+ဂ+၆) ၈ဏန်းသုံးလုံးပေါင်းလိုက်သော်
(၂၁) ရသည် လာမည် ၂၁ ရာစုနှစ်သို့ရောက်သောအခါ ကျန်ုပ်တို့ရဲ့ အစ္စ လာမ်ဘာသာတရားတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာလောကကြီးရှိ လူမျိုးအားလုံးတို့ ၏ ထိပ် ဆုံးက ရောက်ရှိ ရမည် ဟူသော အမှတ် အသားပင်ဖြစ်သည်
မှတ် ချက် ။ တျန်ုပ်တို့အားလုံးသည် စီးပါွးရေး လူမူ ရေးများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်အစ္စ လာမ်ဘာသာ ပြန် ့ပါွးရေး ထွန်းကားရေး လွှမ်းမိုးရေး အတွက် ထိုးစစ်တရပ် အနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ကြရပေမည် ထို ကြောင် ကျန်ုပ် တို့၏ ဘာသာ အမှတ်အသားပါသော ဈေးဆိုင်မျာမှ တစ်ပါး ဘာသာခြား လူမျိုးခြားဖြစ်သော မြန် မာ တရုတ် ရှမ်း
ကရင် ရခိုင် စသော မြန်မာတို့ ၏ တိုင်ရင်းသားဆိုင်များတွင် လုံးဝ ဈေးဝယ် ခြင်း စာသောက် ခြင်း
စသော စီးပါွးရေး အရဆက်ဆံမှု များ မပြု လုပ်ရေ ပ အထူးသဖြင့် စားသောက်ဆိုင်များ၁၏ဍ် (၇၈၆)
နှင့် () အမှတ်တံဆိပ် နှင့် လခြမ်း တံဆိပ် ဖေါ်ပြထားသော ဆိုင်များဍ် သာ ကျန်ုပ် တို့ မွတ် စလင် ဘာသာဝင် အပေါ်င် တို့ အားလုံ စာသုံကြရမည် ပုံ အမဆန်ဒါန
ဆရာ ကြီးရွေ ဒုံးဘီ အောင် ၁၉၅၃ ခုနှစ်က ရေးခဲ့တာပါ ပို့ တင်ချင်သူများယူတင်ပါ
ကူချင် ဖြန့်ချင်လျှ င်လဲယူသုံးပါ